Wednesday 17th July 2019 10:36:40 in Wararkii Maanta by Tafatiraha Guud
Bisha September 2019 waxaa loo ballansan yahay dhegeysiga dacwadda soohdinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Ballantu waa Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda, ICJ, oo ku taalla magaalada Hague. Soomaaliya ayaa dacwadda u gudbisay Maxkamadda. Kenya waxay berigaas ku doodday in aan Maxkamaddu soo faragashan labada dal oo ay iyagu wadahadal ku dhammeystaan arrintooda.
Bishii September ee 2016 ayay Maxkamaddu afar maalmood dhegeysaneysay Kenya oo fasireysa sababta ay tahay in Maxkamaddu aanay qaadin dacwadda iyo Soomaaliya oo sababeyneysa waxa aan labada dal uga fursaneyn Garsoorka Maxkamadda.
Aniga oo ku magacaaban Danjiraha Soomaaliya ee Qarammada Midoobay ayaan ka mid ahaa Ergada Soomaaliya ee goobjoogga ahaa. Halkaan waxaan kuugu soo koobay afar qormo oo ay Soomaaliya iyo Kenya ay isugu jawaabayaan oo aan berigaas diyaariyay. Waxay kuu sahli karaan fahamka billowga dacwadda.
Afarta Qormaba isla boggan ayaad ka heleysaa.
Paul Reichler wuxuu sheegay in heshiiskan oo ay diyaarisay Norway ay marka hore kala hadashay Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka Soomaaliya, ka dibna ay Soomaaliya codsatay in cinwaanka wax laga beddelo. Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenku wuxuu email uu u diray Danjiraha Norway uga mahadceliyay in ay qabatay howl uu yiri waxay ahayd in aan annagu qabsanno. Waxaa la soo bandhigay email uu diray Ra'iisal Wasaare-ku-xigeenku.
Payam Akhavan oo u doodayay Kenya wuxuu yiri Qareennada Soomaaliya wax badan ayay ka hadleen ayuu yiri, laakiin waxay ka meermeereen in ay ka jawaabaan su’aasha ugu muhiimsan ee Maxkamadda hortaalla. Is-Af-Garadka (MoU) ay Soomaaliya iyo Kenya kala saxiixdeen 2009 macno ma xambaarsan yahay mise maya?
Si macnaha MoU-da loo fahmo, khasab ma ahan ayuu yiri in lagu takhususo Qaanuunka Heshiisyada. Wuxuu si gooniya u daba galay Prof. Pellet oo Talaadadii u dooday Soomaaliya. Wuxuu ku tilmaamay in uu doonayo in macnaha MoU-du ay leedahay uu keliya ku soo koobo cinwaankeeda.
Garyaqaanka Kenya, Githu Muigai wuxuu Guddoomiyaha Maxkamadda iyo xubnaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda uu u soo jeediyay codsi ay Kenya qabto:
Paul Reichler ayaa sheegay hadalladii uu isagu Maxkamadda ka jeediyay wareeggii koowaad in ay Qareennada Kenya hadda aqbaleen ama ugu yaraan aanay dood ka hor imaaneysa aanay bixin sidaa darteedna looga talo geli karo in sidooda ay u aqbaleen.
Wuxuu taxay toban qodob oo qaanuuniyan muhiim ah oo uu sheegay in uu ku jeediyay jawaabtiisii wareegga koowaad. Taas oo Kenya ay fursad u heysatay in ay riddiso markii ay sameyneysay soo jeedinteedii wareegga labaad. Mid ka mid ah tobankaa qodob oo ay diideen ma jiro.
Mona Sharman oo iyaduna dood dheer jeedisay ayaa ugu dambeyn soo jeedisay codsiga Soomaaliya ee ugu dambeeya.
Xukumadda Soomaaliya Oo Ka Hadashay Bandhiga Buugaagta Laascaanood [Gudaha Ka Akhriso]
Ciidaanka Ilaalada Badda Somaliland Oo Ka Hadlay Doonyo Sharci Daro Ah Oo Ay Soo Qabqabteen [Muuqaal]
[Xasaasi:-] Dhalinyaraddii Somaliland oo ku sii qulqullaysa Muqdisho, Soomaaliya Oo Xafiis U Samaysay & Moganaanta X
Ciidammada Ammaanka Soomaaliya Oo Soo Af-jaray Weerarkii Lagu Qaaday Hoteel SYL [Gudaha Ka Akhriso]